Izinzuzo zezimbiza ezihlelwe | Bezzia
Imishini emincane benza imisebenzi yethu yansuku zonke ibe lula futhi amabhodwe ahlelwayo awahlukile. Ngenxa yokuhamba kwamanje kwempilo siyaphoqeleka ukuthi senze izinto eziningi ngesikhathi esifushane futhi imbiza ehlelayo isivumela ukuthi sivumelanise imisebenzi ethile yasendlini. Kepha iyini imbiza ehlelwe?
1 Iyini imbiza ehlelwe?
1.1 Umehluko ngeprosesa yokudla nebhodwe lokwemba
2 Izinzuzo zebhodlela elihlelelwe
Iyini imbiza ehlelwe?
Amarobhothi ekhishi, amabhodwe ahlelwe kahle, abapheki abahamba kancane ... ngabe sazi kahle ukuthi sisho ukuthini uma sikhuluma ngalunye lwale mishini emincane? Yize sivame ukuthambekele ekubonaneni amarobhothi ekhishini, awafani.
Ibhodwe elicwangciswayo lipheka ingcindezi kagesi. Idizayini yayo iyefana naleyo yefryer ejulile: inesembozo engxenyeni engenhla ekuvumela ukuthi ufake izithako, i-valve efana naleyo yabapheki bendabuko abasheshayo, abalingisa uhlelo lwabo, ne-thermostat.
Izimbiza ezihlelwe nazo zinephaneli langaphambili ku- kuzodingeka ukhethe uhlelo olufunayo kuphela. Ziyabila, ziyosa, ziyosa, ziyosa ... futhi zikwazisa uma ukudla sekuphelile. Ziyakwazi ukuhlelwa, ngakho-ke ungalungisa ukudla ngesikhathi osikhethayo, njengoba kusanda kwenziwa. Kuthiwani uma ugesi uphela? Ngeke uzikhathaze: lapho ebuya uzoqhubeka khona lapho egcine khona, ngenxa yememori yakhe.
Izimbiza eziningi ezingahlelelwa nazo zine- ukushisa nokukhetha kabusha inketho, ekuvumela ukuthi ungangcolisi izitsha eziningi. Futhi kujwayelekile ukuthi banenkinobho ebonakalayo yokuzihlanza.
Umehluko ngeprosesa yokudla nebhodwe lokwemba
Uyini umehluko phakathi kwalokhu okusetshenziswayo nerobhothi lasekhishini? Ngenkathi imbiza ehlelwe «solo» abapheki, irobhothi lasekhishini liyaqhubeka, liphinde licubungule ukudla. Lokhu kungukuthi, erobhothini lasekhishini unganqamula, uqede uxove ... Futhi kuthiwani nge Imbiza yokupheka ehamba kancane? Sakhuluma ngalolu hlobo lwamabhodwe kudala futhi kanzima kudala; Yizimbiza zendabuko kodwa zikagesi ukupheka emlilweni omncane.
Abapheki abahamba kancane bayilaka lonke
Izinzuzo zebhodlela elihlelelwe
Ukwazi izici eziyinhloko zebhodlela elihlelwe kalula, kulula ukuqagela izinzuzo elisinikeza zona. Uma upheka njalo kepha ungenasikhathi esiningi noma ufisa ukuchitha okuningi, ngaphandle kokungabaza lokhu kuyindlela enhle yezizathu ezilandelayo.
Zilula. Noma ngubani okwazi ukusebenzisa imbiza ehlelwe. Kufanele nje ukuthi uyixhume, ufake izithako, ukhethe uhlelo lokupheka bese ulinda ukuthi isidlo silungele.Ukucindezela ukucindezela kuzoba lula njengokucindezela inkinobho.
Zinciphisa isikhathi sokupheka. Ungapheka ngokufana nasembizeni yendabuko kodwa ngesikhathi esifushane kwazise ipheka ngomfutho ophakeme. Ngaphandle kokuthi wazi, izokupheka izitsha zakho ngokushesha.
Sebenzisa amandla amancane nogesi kunembiza ejwayelekile. Ngokunciphisa ukushisa okunikeziwe nesikhathi sokupheka, ungonga amandla afinyelela kuma-70%, okuzothinta kahle imali oyikhokhayo kagesi.
Baphephile. Lezi zimbiza zokupheka ezihlelwe zinobuchwepheshe obenza ziphephe kakhulu. Khohlwa ngokusha okungafuneki nezehlakalo zasekhishini ngenxa yengcindezi eyeqile. Zinezinhlelo ezikuxwayisa uma isivalo singavaliwe kahle futhi sine-pulsed compression system, ukuze sigweme ukusha lapho sivula isivalo. Ngaphezu kwalokho, ugwema ingozi yokukhohlwa umlilo: ikuxwayisa uma usuqedile futhi ngokuzenzekelayo icisha lapho isiqedile.
Bayakuvumela ukuthi upheke konke. Iningi linezinhlelo ezahlukahlukene zokupheka: i-turbo, ingcindezi, i-steamed, isitshulu, ukuzingela ngokungemthetho, i-confit, irayisi, i-pasta, i-griddle, i-gazinga, i-gazinga, i-ovini ... Futhi kufakwe ebhokisini incwadi enemiqondo eminingi yokuthi ungayilungisa kanjani imenyu yakho yamasonto onke kulula. Hlala phansi imizuzu eyi-10 njalo ngeSonto, uthole imibono yokulungisa imenyu isonto lonke bese ukhohlwa ukuzibuza usuku ngalunye ukuthi uzophekeni ngosuku olulandelayo.
Ngabe uthola izimbiza ezihlelelwe imali enhle ekhishini lakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » Izinzuzo zezimbiza ezihlelwe